Bvudzi Curler, Bvudzi Rinotwasanudza, Bvudzi Rinotwasanudza Bhurasho - Tingxuan
Bvudzi Curler S201
Bvudzi Rinotwasanudza 579
Bvudzi Straightener uye Bvudzi Curler W3392
Ningbo Tingxuan Magetsi Magetsi Co, Ltd.
Ningbo Tingxuan Electrical Appliance Co., Ltd. inotengesa uye wholesales kugera uye kugadzira zvigadzirwa nemidziyo mumusika wevatengi, ichifarira chinzvimbo chepamusoro pakati pevatengi. Iyo kambani yakagadza kwenguva refu uye yakagadzikana kudyidzana hukama nevazhinji vevatengesi nevamiriri. Ningbo Tingxuan Magetsi mudziyo fekitari inotengesa mamwe ekugadzira misoro zvigadzirwa nemidziyo ine mhando dzakasiyana nemitengo inonzwisisika. Isu tinonamatira kukosha kukuru kuchikwereti, tinoteerera chibvumirano, tinovimbisa chigadzirwa chigadzirwa, uye tinokunda kuvimba kwevakawanda vevatengi vane hunhu hwekushanda kwakanaka uye musimboti wepundutso diki uye nekukurumidza kutendeuka.
UNGASHANDISA SEI Bvudzi CURLER Kana iwe uri kushandisa yechinyakare vhudzi curler, hezvino zvekuita. 1. Tora chikamu chebvudzi. Gadzira chikamu chebvudzi kuti curl. Izvo zvidiki chikamu, chakasimba curl. T ...
Kushandisa • Usambobata zvigadzirwa zvemagetsi kana maoko akanyorova uye tsoka dzakashama. • Pfeka shangu yerabha kana yepurasitiki paunenge uchishandisa midziyo yemagetsi, kunyanya kana uri ...
China's runako uye indasitiri yekugera vhudzi yakatanga kuva indasitiri inosanganisira dzakasiyana siyana minda, kusanganisira kuveura misoro, runako rwechinyakare, runako rwekurapa, dzidzo uye kudzidziswa, o ...